विचार – Everest Pati
गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु…
श्रीमान्लाई नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाइ प्रगती गर्न दिदैनन ! चाहे जसले जे भनोस श्रीमान भनेका देवता हुन् । श्रीमानहरु परिवारको लागि मर्न तयार हुन्छन । आफ्नो श्रीमान लाइ जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने हेपेर…
आजकल नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डिभोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ?सामाजिक संजालमा चितपरिचित लेखेक गणेश ज्ञवालीले तयार पारेका श्रीमतीलाई खुसी बनाउने…
तिमी छैनौ भएर यो जवानी के गर्नु
admin Apr 20, 2020 0
“सुमन स्मारिका” घरी घरी लाग्ने गर्छ जिन्दगानी के गर्नु तिमी छैनौ भएर यो जवानी के गर्नु न खान दिन्छ न भोक मेटाउँछ पेटको त उसको पनि राहदानी के गर्नु पोखिन देउ बगरले प्यास त मेट्ला थोरै राखेर आँखामा यति धेरै पानी के गर्नु गर्न त गरिन्छ नि…
अध्यात्म : जीवन यात्रालाई उत्कृष्ट बनाउने मार्ग
admin Apr 13, 2020 0
तपाईंलाई अध्यात्ममा कति रुची छ ? यो प्रश्नको जवाफमा अक्सर हामी नाक खुम्च्याउाछौं । किनभने अध्यात्म भनेको मन्दिर धाउनु, पूजापाठ गर्नु, ब्रत बस्नुलाई हामी अध्यात्म भनेर बुझ्छौं । हामीले बुझेका यस्तै धार्मिक विधि-विधान आत्मसात गर्नेलाई हामी…
कसको शरीरमा कस्तो आभा मण्डल ?
देवी अथवा देवताको चित्रहरुको पछाडि देखिने गोलाकार प्रकाशलाई आभा मण्डल भन्ने नामले चिनिन्छ । वास्तवमा, आभा मण्डल हाम्रो शरीरको वरपर एउटा शक्ति घुमिरहेको हुन्छ । विज्ञानको भाषामा यसलाई इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेटिक फिल्ड भनिन्छ । आभा मण्डल सजीव…